Shiinaha X6 soosaarka tooska ah iyo Warshadda | Tiknoolajiyada Caafimaadka ee Cadeysan ee Hebei
1. Seddex qaab, muujinta iftiinka gadaal iyo qaab cabir sax ah ayaa ah muuqaalka sheygan.
2. Waxaa jira seddex qaab oo lagu cabiro heerkulka jirka bini'aadamka, sheyga iyo gudaha.
3. Bandhigga iftiinka dambe ee saddexda midab leh ayaa ka cad oo qurux badan.
4. Cabbirka heerkulka aan la xiriirin wuxuu qaadanayaa kaliya hal ilbiriqsi si fudud loo cabbiro, iyo baaritaanka dareeraha infrared wuxuu hubiyaa waxtarka sare iyo qalad la'aanta kor iyo hoos 0.3 °.
5. Soo bandhig font madow shaashadda weyn. Fuselage-ka waxaa loogu talagalay inuu la jaanqaado bani-aadminimada, xakamaynta qalooca waxay kordhisaa xajinta, heer kulkuna wuxuu u dhexeeyaa 32-42 digrii.
6. Masaafada cabirku waa qiyaastii 5CM, heerka ugu hooseeya ee heer kulka waa 32 darajo halka ugu badana ay tahay 42 darajo. Ciladdu waa 0.3.
1. Qiyaasta heerkulka jidhka bini’aadamka: Si sax ah u cabbira heerkulka jidhka bani’aadamka, iyada oo la beddelayo heerkulbeegyada dhaqanka ee meerkuriga. Haweenka raba inay carruur dhalaan waxay isticmaali karaan heerkulbeegga infrared (food thermometers) si ay ula socdaan heerkulka aasaasiga ah ee jirka xilli kasta, waxay duubtaan heerkulka jirka inta lagu jiro ugxanta, waxay doortaan waqtiga saxda ah ee ay uur qaadaan, waxayna cabbiraan heerkulka si ay u go'aamiyaan uurka.
Dabcan, waxa ugu muhiimsan waa in la fiirsado haddii ay jiraan wax aan caadi ahayn heerkulka jidhkaaga wakhti kasta, si looga fogaado infekshinka ifilada, iyo in laga hortago ifilada doofaarka.
2. Qiyaasta heerkulka maqaarka: cabir heerkulka dusha sare ee maqaarka dadka. Tusaale ahaan, waxaa loo isticmaali karaa dib-u-abuurka xubin addin ah.
3. Cabirka heerkulka shayga: cabir heerkulka dusha sare ee shayga, tusaale ahaan, waxaa loo isticmaali karaa in lagu cabbiro heerkulka dusha sare ee macallinka.
4. Qiyaasta heerkulka dareeraha: cabir heerkulka dareeraha, sida heerkulka biyaha qubeyska ilmaha. Markuu ilmuhu qubeysto, cabir heerkulka biyaha, ha uga sii werwerin qabow ama kulul; sidoo kale waxay cabbiri kartaa heerkulka biyaha ee dhalada caanaha si loo fududeeyo diyaarinta budada caanaha ilmaha;
5. Waxay qiyaasi kartaa heerkulka qolka
1. Fadlan akhri tilmaamaha la adeegsanayo cabirka ka hor, wejiga waa inuu ahaadaa mid qallalan, timuhuna waa inaysan daboolin wejiga (fadlan ku samee cabirka jawiga 10 ℃ -40 ℃) si loo hubiyo saxnaanta cabirka.
2. Heerkulka wejiga si dhakhso ah loogu cabiray sheygan waa tixraac oo kaliya waana inaan loo isticmaalin aasaas u ah xukun caafimaad. Haddii heer kulka jirka aan caadi ahayn la helo, fadlan isticmaal heerkulbeeg caafimaad si loo cabbiro.
3. Fadlan ilaali muraayadaha indhaha oo nadiifi waqtiga loogu talagalay. Haddii heerkulka jawiga isbeddelayaa uu aad isu beddelo, waxaad u baahan tahay inaad dhigto aaladda wax lagu cabbiro ee deegaanka aad rabto inaad cabirto 20 daqiiqo, oo aad sugto inay xasiliso si ay ula qabsato heerkulka deegaanka ka hor inta aanad u adeegsan si aad u hesho qiime ka sii sax ah.
Xiga: X6 cawl